Archdiocese of Mandalay blog: အမျိုးသမီးဖြစ်ရခြင်း၌ . . . ( ၂ ) ။
Luciano Cian မှ "God's Plan misunderstood" (ဘုရားအစီအစဉ်ကို တလွဲနားလည်ခြင်း) ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်နှင့် ဤသို့ ရေးသားထားသည်။ "ပုံသေနည်းအရ ခင်ပွန်းနှင့် ဇနီးတူညီသောအဆင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင်မူ ဇနီး (အမျိုးသမီး)သည် ပိုနိမ့်သောအဆင့်၌ရှိသည်၊ ဘုရားသခင်၏ မူလအစီအမံဖြစ်သော အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားကြားတွင်တန်းတူညီမျှရေးသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ် ဂျူးလူမျိုးများက သွေဖယ်သွားစေခဲ့ကြသည်။ ၄င်းကို ဓမ္မသစ်ခေတ်တွင် သခင်ယေဇူးက ပြန်လည်ချမှတ် ပေးခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် (မ)နှင့် (ကျား)တန်းတူညီ ဂုဏ်ရည်ရှိမှုကို တင်ပြ ထားပေသည်။ ဖန်ဆင်းရှင်၏ အလိုတော်မှာ ဂုဏ်ရည်တူ လူအမျိုးအစား နှစ်မျိုးတို့အချင်းချင်း အကူအညီဖြစ်စေ၊ အပြန်အလှန် ဖြည့်စွက်ကြစေရန် အလို့ငှါသာ ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။" (ကမ္ဘာဦး ၂း၂၃)။
"အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား၏ လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်အခန်းကဏ္ဍ မတူညီ ကွဲပြားသည် မှန်ပါ၏၊ သို့သော် လူပုဂ္ဂိုလ် တန်ဖိုးချင်းမူကား တန်းတူရည်တူသာ ဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးအပေါ် မတရား အထက်စီးမှ အနိုင်ယူသည်ဟု ပြောရန်မှာ ၀မ်းနည်းဖွယ်၊ ရှက်ဖွယ်ဖြစ်၏။ သခင်ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခြင်း အစကတည်းက ထားရှိရည်ရွယ်သော အမျိူးသမီးတို့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်ထူမြောက်ပေးရန် ကြွလာခဲ့ပေသည်" ဟူ၍လည်း "Woman:aperson uniquely creative" စာအုပ်တွင် ရေးသားထားပါသည်။
လူတွင် အဆင့်အတန်း၊ အမျိုးအမည်၊ အသင်းအဖွဲ့၊ မြေနေရာဒေသ စသဖြင့်ခွဲခြားခြင်းကို ၀ါသနာပါသည့် စရိုက်ရှိနေပေသည်။ ခွဲခြားမှု အမျိုးမျိုးထဲမှ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား(အမ၊ အဖို) ခွဲခြားမှု တစ်ခုကလည်း အခိုင်အမာ အမြစ်တွယ်နေသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ကျွန်မတို့နေထိုင်သော လောကကို အမျိုးသား (အဖို)ကြီး စိုးလျက်ရှိကြောင်း ထင်ရှားပေသည်။
အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှစ်မျိုးလုံး ပါဝင်သော ကိစ္စတစ်ခုခု တင်ပြရန်ရှိလျှင် ထိပ်မှ၊ ရှေ့မှ အမျိုးသားအမည်များ အစီအရီ ရေးသားပြီးမှသာ နောက်မှ အမျိုးသမီးအမည်များ ရေးလေ့ရှိကြသည်။ အသေးဆုံး ဥပမာ အဖြစ် - သီချင်းခွေ၊ စီဒီဖုံးပေါ်မှ အဆိုတော်များ အမည်စာရင်းကိုသာ ကြည့်ပါ။
ဤသည်မှာ ရှေးပဝေသဏီမှ မြစ်ဖျားခံလာသော အယူအဆဖြစ်၍ မည်သူ့ကိုမျှ တရားခံစစ် ရှာမရနိုင်သကဲ့သို့ အပြစ်ပုံချရမည့်သူလည်း တွေ့မည် မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသားက မြတ်သည်၊ မြင့်သည် ဟူသည့် အယူအဆကို အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကပင် ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံနေကြပေသည်။ အမျိုးသား၏ မြင့်ခြင်း၊ မြတ်ခြင်း အယူအစွဲသည် မည်မျှထိ ခရီးရောက်သွားသနည်းဟူမူ မိမိကိုးကွယ်သည့် ဘုရားနှင့်ပင် နှိုင်းယှဉ်၊ တိုင်းတာသည်အထိ ဖြစ်သွားရသည်။ အဖိုမဟုတ်၊ အမမဟုတ်၊ ခန္ဓာကာယလည်းမရှိ၊ ၀ိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်သော ဘုရားကိုပင် အမျိုးသား (အဖို) အဖြစ်သာ မြင်ယောင်တင်စား လက်ခံ ထားကြလေသည်။
ဤအချက်နှင့် ဆက်စပ်၍ "အာရှအမျိုးသမီးအသင်းတော် (EWA)" ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး (အင်ဒိုနီးရှား)တွင်၂၀၀၄ခုနှစ်က သွားရောက် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သော Sr.AnnShwe, SJA၏ ရှင်းလင်းကိုးကားချက်များမှ တစ်ချက် ထုတ်နှုတ် ဝေမျှလိုသည်မှာ" ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို ဖြူသော ၀တ်ရုံတော် ၀တ်ဆင်ထားလျက် မုတ်ဆိတ်ရှည်ကြီးနှင့် (ယောက်ကျားသား) အဖိုးကြီး၏ ပုံရိပ်မျိုး မြင်ယောင်တတ်ခြင်းကို မေ့ဖျောက် ပစ်ကြပါစို့။ ဘုရားကို မည်သူမျှ မမြင်စဖူးပါ၊ အမျိုးသားပန်းချီ၊ ပန်းပုဆရာများက ရေးဆွဲထုလုပ်သည့် ဘုရားပုံတော်များကိုသာ မျက်စိယဉ်နေခဲ့ကြသည်။ စွဲထင် နေခဲ့ကြပေသည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ဘုရားကို ဤသို့ အမျိုးသားဟန် သဏ္ဍန်ဖြင့် ရူပါရုံ မြင်ရပါသည် ဆိုလျှင်ပင် ၄င်းသည် ကာလံ၊ ဒေသံနှင့် အခြေအနေတစ်ခု၏ သီးခြားလိုအပ်မှုအတွက်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ (အမ၊ အဖို) ခပ်သိမ်းကို အသက်ပေးသွင်းသူ လိင်မဲ့၊ ခန္ဓာမဲ့ဝိညာဉ် သက်သက်ဖြစ်သော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကို ကျမ်းစာမှလည်း ဘုရားသခင်သည် (အဖို) ဖြစ်တော်မူ၏။ သို့မဟုတ် (အမ) ဖြစ်တော်မူ၏ဟု ဖေါ်ပြခြင်းထက်၊ ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဖြစ်တော်မူ၏ (၁ ယော ၁း၁၆ ) ဟုသာ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် လူကို ဖန်ဆင်းကတည်းက "ငါတို့နှင့် တညီ၊ တစ်သဏ္ဍန်တည်း လူကို ဖန်ဆင်းကြစို့" ဟုသာ ပြောခဲ့ပါသည်။ "လူတန်းစား နှစ်မျိုးကို ဖန်ဆင်းကြစို့" ဟုမပြောပါ။
(ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁၆း၇၈) က ဟာဂရအမည်ရှိသော ကျွန်မတစ်ယောက်ကို ကောင်းကင်တမန်က မေးသည့် "ဘယ်ကလာပြီး၊ ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ" ဟူသော မေးခွန်းသည် အမျိုးသမီးတိုင်း မိမိကိုယ်ကို ပြန်မေးရမည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းမေးခွန်းကို ဖြေရန် ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ဘုရားစကား၌ သင်ခဲ့ရသော အမေး၊ အဖြေတစ်ခုက အကျုံးဝင်နေပါသည်။ "ဘုရားသခင်က လူကို ဘာအတွက် ဖန်ဆင်းတာလဲ" "သူ့ကို သိဖို့၊ သူ့ကို ချစ်ဖို့၊ သူ့ကို အစေခံဖို့နဲ့ နောင်ဘ၀ကျရင် သူနဲ့အတူ ထာဝရပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားရစေဖို့" ဟူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားထံမှလာကာ ဘုရားထံသို့ ပြန်သွားရမည့် အမျိုးသမီး၏ အရည်အသွေးကို ပို၍ ညံ့ဖျင်းသော လူသားတစ်မျိုးအဖြစ် ဖန်ဆင်းထားပါမည်လော။ အမျိုးသမီး (အမ) ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသား (အဖို) ဖြစ်စေသူ၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သော ဘုရားနှင့် တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်စေရန်သာ ဖန်ဆင်းထားပါသည်။ ၀ိညာဉ်သက်သက်ဖြစ်သော အဖိုလည်းမဟုတ်၊ အမလည်းမဟုတ်သော၊ အနန္တမေတ္တာရှင်သည် ချစ်ခြင်း မေတ္တာဖြစ်သောကြောင့် ထိုဘုရားသည် လူကိုအညံ့၊ အကောင်းခွဲခြား ပါမည်လော။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် တစ်ဆင့်နိမ့်၊ ဒုတိယတန်းစား၊ အရည်အသွေးညံ့ဘ၀ရှင်ပါ ဟူသည့် အယူအဆကို ခေါင်းထဲမှထုတ်ပစ်ကြပါစို့။" ဤသို့ဆိုထားသည်။
ဘုရားကို "အဖေ" မခေါ်လို၍ မဟုတ်ပေ။ ကောင်းကင်ဘုံသခင် ဖန်ဆင်းရှင်ကို (အဖ) (အဖေ)ဟုတမ်းတ ခေါ်ရခြင်းသည် ဘုရားသား၊ သမီးအဖြစ် ဂုဏ်ယူစရာ ပီတိတစ်ခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားနှင့် လူသား၏ရင်းနှီးခြင်း၊ အားကိုးချစ်ခင်ခြင်းကို သရုပ်ထင်းထင်း ပေါ်လွင်စေပေသည်။ သို့သော် ဤနေရာ၌ ထောက်ပြလိုသည်မှာ လူသားတို့၏ သမိုင်းရေစီးကြောင်းကို အမျိုးသား (အဖို) ကြီးစိုးသော လောကအဖြစ် ဆွဲယူပုံသွင်းနေမှုကို သမင်လည်ပြန် ကြည့်မြင်ကာ၊ သုံးသပ်မိစေရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါက သင့်ကိုယ်သင်ကော မည်သို့ခံယူထားပါသလဲ။ ဘာသာရေး၌၊ လူမှုရေး၌ သင့်မိသားစုအတွင်း၌ကော သင့်ကိုယ်သင် မည်သည့်နေရာ၌ ထားပါသလဲ။ မည်သည့် နေရာ၌ နေရပါသလဲ။
What is your Female image of God?
By Sr. Ann Shwe , (SJA)
- Woman:aperson uniquely creative.
By (Luciano Cian)
- In God's image ( Vol-19, No-2, June 2002)
- Weekly Eleven news letter